Fampiharana Extension-Casting - Digital Manufacturing Co., Ltd.
SL 3D printy
Slå Hi Series
Slå S Series
Handheld tamin'ny laser 3D scanner
Voarafitra mazava 3D scanner
3D FANONTANA PRINTY FITAOVANA
Faran 'izay tsara fotsy-8006
Avo fikirizana resin-9006
HIGH TEMPERATURE mahatohitra RESIN-T1120
FDM 3D Printer Series DQ
DATA PRE-PROCESING SOFTWARE
3D Pirinty natao tamin'ny fampiharana
Rapid nitranga fahiny
Industrial orinasa mpamokatra entana
-Pisainana modely / entana
Fanabeazana sy ny fikarohana
3D scanning fampiharana
Cultural relìka digitization
Mifanohitra design / Modeling
Serivisy fanontana 3D
3D fanontam-pirinty namoaka boosts incustry
3D pirinty manana tena mazava hafainganam-pandeha tombony amin'ny kely batch famokarana, ary manana mazava tombony ho an'ny fampandrosoana ny sasany karazana tetikasa, toy ny fiara, aerospace, fiaramanidina, miaramila, fiaran-dalamby, môtô, sambo, milina fitaovana, ny rano paompy, tanimanga orinasa , sns
A isan-karazany ny vokatra fanariana nentim-paharazana izay sarotra ny hamokatra ihany ho novokarin'ny 3D pirinty toy ny turbine 0.5mm lelany, isan-karazany anatiny menaka hihena andalan-teny, ary isan-karazany castings firafitry sarotra. Ireo mpanjifa dia miparitaka manerana izao tontolo izao.
Fa zavakanto farantsa, isan-karazany ny Lasitra ho an'ny famokarana faobe Azo be mpampiasa.
Miorina amin'ny RP ny fampiharana ny teknolojia, ny fampandrosoana tsipika vokatra vaovao, izay nampiasa ny RTV Silicon fingotra koronosy sy Vacuum Casting, ankehitriny betsaka ampiharina amin'ny sehatry ny fiara, sy ny fitsaboana sns elektronika
Rim: Low-tsindry fihetsiky ny tsindrona koronosy (Epoxy koronosy)
Rim dia ampiharina amin'ny dingana vaovao ny famokarana ny haingokaingony haingana. Izy io dia mifangaro roa-singa fototra polyurethane fitaovana, izay nampidirany ho eo ambanin'ny lasitra ara-dalàna haingana ny hafanana sy ny tsindry ambany, ary namorona ny zavatra simika sy ara-batana toy ny dingana polymerization, crosslinking sy solidification ny fitaovana.
Manana tombony ny avo ny fahombiazana, fohy famokarana tsingerin'ny, dingana tsotra sy ny vidiny ambany. Tsy mety ho an'ny madinika fitsarana vokatra famokarana ao amin'ny dingana fampandrosoana, ary koa ny boky kely-famokarana, tsotra firafitry ny rakotra fanaovam-panavotana sy ny famokarana lehibe matevina-mimanda sy uneven matevina-mimanda vokatra.
Azo ampiharina Lasitra dia: resin bobongolo, ABS bobongolo, aluminium firaka bobongolo fanariana ara-nofo: roa-singa fototra polyurethane fitaovana ara-batana fananana: mitovy amin'ny PP / ABS, ny vokatra dia manana manohitra ny fahanterana, vokany lalina ilay fanoherana, ambony ny mendrika, mora Loading sy mampidina entana toetra.
Ny miasa fitsipiky ny sisiny ambany-tsindry perfusion koronosy dia toy izao manaraka izao: ny mialoha niforona roa-singa (na multi-singa) ranon-javatra akora ireo sakafo any an-mampifangaro lohany amin'ny alalan'ny metering paompy amin'ny anankiray isaky, ary avy eo dia hatrany naidina tamin'ny ny bobongolo mba hanangana ny fanehoan-kevitra solidification koronosy. Ny tahan'ny fanitsiana dia tratra ny fiovana haingana eo amin'ny paompy, izay fehezin'ny tarika habetsaky ny marary mitsika ny paompy sy ny fampidirana ny fotoana.
Carbon fibre / fibre nanamafy plastika (FRP) vacuum fampidirana
Ny fitsipika fototry ny banga dingana fampidirana dia manondro ny fametrahan fitaratra fibre, fitaratra fibre lamba, isan-karazany Manisika, fanafahana lamba, resin permeable sosona, nametraka resin fantsona sy nanarona nylon (na fingotra, amin'ny sitrana gel akanjo sosona). Silicone) malefaka horonantsary (izany hoe kitapo vacuum), ny horonan-tsary sy ny manodidina ny lavaka dia mafy voaisy tombo-kase.
Ny lavaka dia nafindra toerana sy ny resin no nampidirany tao an-lavaka. Koronosy dingana izay ny resin dia resin impregnated miaraka ny sodina sy ny fibre eo ambonin'ny vacuum mba impregnate ny fibre fehin'aina ao amin'ny efitra fanafanana ny hafanana na ambany.
Ny fitambaran'ny 3D teknolojia fanontam-pirinty sy ny nentin-drazana fanariana ny teknolojia no niafara tamin'ny fanariana haingana teknolojia. Ny fitsipika fototra dia ny fampiasana ny teknolojia ho fanaovana pirinty 3D mivantana na an-kolaka pirinty ny sombin-javatra very, polyethylene bobongolo, savoka santionany, môdely, bobongolo, fototra na narendrika nanaovana akorany, ary avy eo dia mitambatra ny nentim-paharazana dingana fanariana ny vy nanipy haingana faritra.
Ny fitambaran'ny 3D teknolojia fanontam-pirinty sy ny fanariana dingana manome milalao feno ny tombony ny fifadian-kanina 3D fanontam-pirinty, vidiny ambany dia ambany, ny fahafahana mpanamboatra faritra sarotra dia nanipy izay mety ho vy, ary tsy tratran'ny endrika sy ny habeny, ary ny vidiny ambany. Ny fitambaran'ny azo ampiasaina mba tsy fahalemena, indrindra sy shortening hanatsotra ny dingan'ny lava endrika, fanovana, redesign ny koronosy.
Fanariana ny fampiasam-bola dia manondro somary fomba vaovao ny nanarato metaly, fantatra amin'ny anarana hoe feno ihany koa lasitra, vaporization, ary cavityless fanariana. Ny nitranga fahiny na ny fanaka sombin-javatra (FOAMED plastika) ary matetika polystyrene nitarina. Ny bobongolo tsara dia feno fasika ny niampatra (FOVNDRY fasika) mba hanangana lasitra (lasitra), ary ny Toy izany koa ny ratsy lasitra. Rehefa metaly anidina no nampidirany tao an-lasitra (izany hoe, ny bobongolo vita amin'ny polystyrene), lasa etona, na ny sombin-javatra very, fa namela ny ratsy lasitra ny foundry fasika feno vy anidina. Io fomba fanariana tatỳ aoriana naneken 'ny mpanao sokitra sy ny fiaraha-monina ankehitriny ampiasaina amin'ny indostria orinasa mpamokatra entana.
SL printy 3D kevitra
Large haben'ny SL printy 3D dia soso-kevitra, toy ny 3DSL-600Hi amin'ny boky manaova ny 600 * 600 * 400 MG sy milina lehibe ny 3DSL-800Hi amin'ny boky manaova ny 800 * 600 * 550mm.
Adiresy: No. 8666 Hunan Highway, Shanghai, Shina.
Raharaha fampiharana ara-pitsaboana: Mampiasa 3D printi ...
Sarivongana lehibe 3D fanontana-sarivongana Venus
Fanontana fampiasana mivantana an'ny 3D
Modely fampisehoana pirinty 3D
Modely fitsaboana 3D fanontana
Envoyer NY US & Get PRICE SY tsipiriany
© Copyright - 2010-2019: Zo rehetra voatokana. Products Guide - Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile